Xinhua Myanmar - ဘိုးရင်းကုမ္ပဏီက PW4000 အင်ဂျင် မတော်တဆ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် 777 လေယာဉ်များ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထား
လေယာဉ်	အမေရိကန်	ဘိုးရင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘိုင်းရင်း 737 MAX လေယာဉ်တစ်စင်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်က ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ Renton ရှိ ဘိုးရင်းစက်ရုံအနီးတွင် စမ်းသပ်ပျံသန်းရန် ပြေးလမ်းပေါ်တွင် နေရာယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)	North America
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းမှ ဘိုးရင်း 777-200 အမျိုးအစားလေယာဉ်တစ်စင်းသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်က ကောင်းကင်ပေါ် ပျံသန်းနေစဉ် ၎င်း၏ ညာတောင်ပံတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အင်ဂျင်တစ်လုံး စက်ချွတ်ယွင်းသွားပြီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ Denver အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
CHICAGO, Feb. 21 (Xinhua) -- U.S. aircraft manufacturer Boeing said inastatement on Sunday that it recommended suspending operations of its 777 airplanes equipped with Pratt & Whitney 4000-112 engines until the Federal Aviation Administration identifies the appropriate inspection protocol.
A Boeing 777-200 flight from the United Airlines made an emergency landing at Denver International Airport on Saturday after the right engine sufferedafailure and exploded mid-flight. Enditem
Photo caption - 737 MAX is towed toward the runway foratest flight near the company's factory in Renton, Washington, USA, 18 November 2020.
Previous Article အမေရိကန် ဂေါက်သီးအကျော်အမော် တိုက်ဂါးဝုဒ် ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရရှိ
Next Article အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ သေနတ်အရောင်းဆိုင်တစ်ခု၌ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ ၃ ဦးသေ ၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ